प्रधानमन्त्री ओलीले भने : सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको सुरुवात ! – Tandav News
प्रधानमन्त्री ओलीले भने : सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको सुरुवात !
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ मंसिर ११ गते मंगलवार ०८:२६ मा प्रकाशित
ताण्डव न्यूज, पाेखरा ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको शुरुवाती दिन भएको बताएका छन्। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको अवसरमा आज एक सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन्।
आजको दिनबाट सरकारले हुँदा खाने र हुने खाने,रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा आजबाट सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु लागू भएको उल्लेख छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीहुँदा नै सबैको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको योजना लागु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गरेका हुन्।
‘श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाज अनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा हामी आजैबट प्रवेश गर्दैछौं’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै देशवासीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भको अवसरमा सबैलाई सुरक्षित भविष्यको शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्।
म्याग्दी भ्रमण वर्ष २०७५ : पर्यटनबाटै मुलुकको विकास गर्न सकिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ